Ọ bụ oge ahụ n’afọ ọzọ. Arebọchị dị ogologo ma ihu igwe dị mma. Ndị mmadụ na-ejikarị oge opupu ihe ubi eme ihe iji nwee ike ihicha ụlọ ha site na elu ruo na ala. Amaara m na emeelarị m ezigbo mmiri nke ụlọ obibi m. Ọ bụghị echiche ọjọọ ịtụgharị ịdị ọcha na mmemme ahịa email gị. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ntinye mmiri:
Ndụ Ọhụrụ. M na-ahụ n'anya n'oge opupu ihe ubi mgbe okooko osisi malitere ịmalite ọzọ - ọ na-adị mma mgbe niile! Enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka mkpọsa email gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, were ụfọdụ ume ume gị imewe. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha mara mma, ọ bụrụ na ị na-eji otu ụdị ahụ maka otu afọ - ọ nwere ike ịbụ oge ịnwale ọdịdị ọhụrụ. Mepụta masterpiece, yabụ mgbe ndị debanyere aha natara ozi gị, ọ na-eju ha anya na ọmarịcha ozi ịntanetị gị bụ!
Gbalịa Ihe Ọhụrụ. M na-ejikarị oge nhichapụ oge opupu ihe ubi m eme ihe dị ka ohere iji hazie oghere dị n'ụlọ m - ịnwale nhazi ọhụrụ iji hụ ụdị ntọala kachasị amasị m. Eleghi anya oge eruola ka ị nwaa ihe ọhụrụ na mmemme ahịa email gị? Dabere na Merkle's “View From the Digital Inbox” na 2011, “55% nke ndị nwere ekwentị eji ekwentị na-eji ya elele akaụntụ email ha.” Ikekwe ị banyela n'ọgba aghara site na mkpọsa email gị. Anọla ebe ahụ! Gbalịa ilekwasị anya na ekwentị ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ebe ndị na-ege gị ntị nọ ma ọ bụ ederede ịdenye aha? Ihe ọ bụla iji nye mgbasa ozi email gị ntakịrị oomph na oge ọhụrụ!